दाङ्ग घट*नाको कारण सुन्दा सबै छ*क्क ! एउटा कुखुराको भालेका लागि साथिले यस्तो पनि गरे | Public 24Khabar
Home News दाङ्ग घट*नाको कारण सुन्दा सबै छ*क्क ! एउटा कुखुराको भालेका लागि साथिले...
दाङ्ग घट*नाको कारण सुन्दा सबै छ*क्क ! एउटा कुखुराको भालेका लागि साथिले यस्तो पनि गरे
दाङ्ग घट*नाको कारण सुन्दा सबै छ*क्क ! एउटा कुखुराको भालेका लागि साथिले यस्तो पनि गरे, ुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु पुरा भिडियो हेर्नुहोस्
धनसम्पति कमाउन र धनी बन्न धेरै नै मेहनत गर्नुको विकल्प छैन । तर केही राशिहरुका लागि भने भाग्यमा नै धनी बन्ने संभावना हुने गर्दछकतिपयले यसलाई किस्मत भन्दछन्। कुल १२ राशिमध्ये ४ राशिका ब्यक्तिलाई उनीहरुको भाग्यले नै धनी बन्न साथ दिन्छ। निम्न ४ राशिका ब्यक्तिले धेरै नै सम्पति कमाउँन सक्ने ज्योतिष विद्याका जानकारहरु बताउँछन।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
१)वृष राशि:-वृष राशिका जातकमा सुन्दर र विलाशी सामान किन्ने शौख हुन्छ । औसत ब्राण्डका सामग्री यी राशिका ब्यक्तिलाई मन पर्दैन । तसर्थ यी राशिका ब्यक्ति स्वतः धेरै धन कमाउन लालायीत हुने गर्दछन् । साथै वैभव प्राप्तिका लागि पनि यस राशिका ब्यक्तिलाई भाग्यमानी मानिन्छन् । उनिहरुलाई धनी बनाउन राशि नै सहायक बन्ने गर्दछ ।
२)वृश्चिक राशि:-धनी बन्ने सूचीमा वृश्चिक राशिका जातक पनि पर्दछन्। यस राशिका ब्यक्तिलाई भौतिक वस्तुको आकर्षण हुने गर्दछ। ठूला घर, कार, ब्यापार ब्यवसाय प्रति उनिहरु लिप्त हुन्छन। दृढ निश्चयी भएका कारणले पनि सम्पति कमाउने मामलामा वृश्चिक राशिका ब्यक्ति आफैँ पनि मेहनत गर्दछन् भने भाग्यले पनि साथ दिने गर्दछ।
३)कर्कट राशि:-कर्कट राशिका जातकलाई धन, सम्पति कमाउन भाग्यले नै साथ दिने गर्दछ। यी राशिका ब्यक्ति अवसरका खोजिमा हुन्छन्। जहाँ उनिहरुको रहर पूरा गर्न राशि नै सारथी बनिदिन्छ। कर्कट राशिलाई स्वभावतः धनी बनाउन उनिहरुको आकांक्षा र भाग्य बलियो हुने गर्दछ। यी राशिका ब्यक्ति जग्गाजमिनको कारोबारबाट चाडैं धनि बन्ने गर्दछन्।
४)सिंह राशि:-सिंह राशिका जातकलाई भीडका बिचमा आफ्नो पहिचान बनाउने शौख हुन्छ। उनिहरु अन्य राशिका ब्यक्ति भन्दा फरक हुने चाहाना राख्दछन्। साथै उनिहरुलाई सम्पतिको मामलामा राशिले पनि साथ दिने गर्दछ। महंगा कार, गरगहना, रुपैयाँ पैसाको चाहाना उनिहरुको सामान्यतयाः पूरा हुन्छ उल्लेखित सूचीमा तपाईको राशि समावेश छैन भने पनि चिन्ता नगर्नुहोस्। किनकी सम्पति वा नाम कमाउन आफ्नो मन, मष्तिष्क र मेहनतले नै पूरा गर्ने।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
Previous articleफेरि चर्कि’यो नवराज विक र सुष्मा मल्ल को सच्चाई अदा’लतको गेटमा घम्सा*घ*म्सी? nabaraj bk susma malla
Next articleयसरी मा’रि’एको रहेछ दुई प्रहरीलाई ! पक्राउ परेकाले दिए यस्तो वयान